I-Take Of Semalt Kwii-Rogue Sites - Impembelelo Kwiedatha Zakho
Iziza ezinobungozi kunye ne-spam yokudlulisela idibeneyo kunye neenkcukacha zoshishino kwi-intanethi kunye nedatha ixesha elide ngaphandle kwemvume yabo. Inani elithile le-B2C ne-B2B ishishini lithatha ukuba imbandela yeziza ezinamandla ezithumela izithuthi kwiisayithi zazo ziphathwa ngokuzenzekelayo yi-Google Analytics, imeko ephazamisa idatha yamashishini amancinane.
URyan Johnson, enye yeengcali ezikhokelayo Semalt , unika ulwazi oluncedo malunga noku kukunceda ukuba uqonde impembelelo yeesayithi eziqatha kwi data yakho.
Ugaxekile kunye nabaxhamli baxhomekeke kwiikhowudi zokulandelela ukuqhuba i-fake traffic kwi-website yakho ye-malware kunye ne-sneaking sneaking. Ngokubeka ikhowudi yakho yokulandelela kwi-site yakho, ukutyelela kwisayithi yabo kuboniswa ngokuzenzekelayo kwi-Google Analytics yakho ngokuzenzekelayo. Oku kungayichaphazela kakhulu iwebhusayithi yakho ngeendlela ezimbini. Okokuqala, i-malware kunye ne-bot zithuthi zingathatha ulawulo lwewebhusayithi yakho engozini ngeenkcukacha zakho. Okwesibini, iindwendwe ezihanjiswe kwi-site yakho zingakhupha emva kwamaphepha akho achaphazela amaxabiso akho.
Xa abathengi bevakashela iwebhusayithi yakho kwaye uqhubeke nokuchofoza kumaphepha akho, amazinga okuhlawula aphezulu, ukubeka igama lakho elingundoqo kwiindawo ezifanelekileyo ukuba zibekwe phezulu kwiimpawu zokulungiswa. Nangona kunjalo, iindwendwe zikhawuleza emva kwamaphepha akho ahlawule amanqanaba akho, umzekelo owenza izilungiso zokumakisha igama lakho elingundoqo njengento engabalulekanga. Le yilapho imfuneko yokukhusela iindawo ezinamandla kunye ne-spam yokubhekisa ekutyeleleni indawo yakho.
Iingcebiso malunga nendlela yokuchonga nokubeka iindawo ezinzima
Ukudala ingxelo yomninimzi wokubamba iqhosha kunye negama legama lomninimzi lisetyenziselwa ukuchonga iindawo ezinamandla. Amatriki 'ootyelelekileyo' kunye 'nokutyelela' asetyenziselwa ukulinganisa inani leetyelelo ezatyelela iwebhusayithi yakho..Sebenzisa iinjongo zakho zophuhliso kunye neengeniso ukuqinisekisa ukuba i-traffic yangempela ayiyi kuhlonywa. Ngenye indlela, unokongeza isihlungi esitsha kwirekhodi yakho yesiqhelo ukuba ungabandakanyi i-traffic yangaphakathi, i-bot kunye nezigulane, kunye ne-spam yokudlulisela ezibandakanya iziqinisekiso zakho zesizinda.
Nangona kunjalo, kucetyiswa ukuba uyenze ngokucophelela imisebenzi yakho xa ungabandakanyi iindawo ezinamandla kunye ne-spam yokudlulisela kwi-Google Analytics yakho. Amaqhosha amabini anxulumene neGoogle aboniswe kwicandelo lakho akufanele athathwe njengeziza ezinamandla njengoko oku kungakhokelela ekulahlekelweni kolwazi oluxabisekileyo. Icandelo liphinde liqulethe i-web-cache ebonisa xa iindwendwe zichofoza inketho 'yecache' kunye negama lomninimzi wokuguqulela olubonisa ukuba ezinye zeendwendwe zakho zingasebenzisa inkonzo yokuguqulwa kweGoogle.
Hlola kwicandelo lakho ukuze ubone ukuba uza kubona amanye amagama ekuthiwa awunayo. Ukuba ubatshengisa, bawubethe phantsi kwiindwendwe zokuhamba. Namathisela igama lomninimzi we-URL kwiindwendwe zakho zokuhamba ngekhasi ukuze ukhangele iisayithi usebenzisa i-traffic yakho yangempela. Emva kokuqiniseka ukuba i-domain ixhamla, yicoca ngokusetyenziswa kwezi nkqubo zilandelayo.
Ukucoca iziza ezinamandla usebenzisa indlela yokuchithwa okucwangcisiweyo
Emva kokufumanisa uludwe lwamagama okubamba ukukhutshwa, faka izihlomelo ezintsha zokungabikho. Xa usebenzisa le ndlela yokungabandakanyi iindawo ezisemgangathweni, kucetyiswa ukugcina ingqalelo ukuba izihlungi ezintsha zibandakanya idatha entsha. Yenza esinye isihlungi-fayile ukuba sihlale singagqitywanga ngexesha lokuqhutywa kwakho. Ngale ndlela, uya kufumana idatha yakho nangona udibanisa kunye nokukhishwa kwakho.
Indlela yokukhutshwa ngokuchanekileyo
Kule ndlela yokungabandakanyi amasayithi aqhoshayo ukusuka kwi-Google Analytics, iipoleni zicutshungulwa kuxhomekeke ekubeni ingaba zihambelana namagama akho abanjwe. Ukuba igama lomninimzi wolwazi olucatshulwayo aluhambelani nemimandla, idatha ayikwazi ukufunyanwa kwingxelo yakho.
I-Google Analytics ifikelele ekuhlanguleni amabini amabini e-B2C kunye ne-B2B asebenza kwiiplani ze-intanethi. I-firm can now now filters and exclude sites, a spam, and malware kwiwebhusayithi yabo ukuze bafumane iingxelo ezicocekileyo nezichanekileyo. Qaphela xa ungabandakanyi amasayithi aqhoshayo kwiGoogle Analytics ukuphepha ukukhetha ulwazi oluxabisekileyo.